Tea ukuphuza igcwele ikhubalo ekhethekile, ephumula futhi ikhuthaza izingxoxo engqondo. Kungakhathaliseki ebusika noma ehlobo egcekeni, kukhona njalo itiye ngesikhathi kule ukudideka kosuku. Futhi-ke, akunakwenzeka ukuba sicabange yangempela itiye mkhosi ngaphandle awukudla amnandi. Ngo kubanda, kuba okunama-kilojoule amaningi okukhona - ushokoledi, amabhisikidi, amakhekhe. Kodwa ngesikhathi sokushisa ngokuphelele ungafuni lutho olusindayo. Iqala ukunambitheka marmalade nge nezithelo asidi ezimnandi - okudingayo i party itiye ntambama. Bayakhohlwa ukuthi umkhiqizo, okuyinto sichichime emashalofini. Yenza marmalade kangcono ekhaya, futhi sikwazi ukukusiza ngalokhu.
A ehlukile enempilo ukugcina marmalade wathenga
Marmalade - ukuhlafuna ubumnandi kusukela ebuntwaneni. Lokhu elikhanyayo, agqamile kakhulu, esihlwabusayo kakhulu, ukuthi isandla kanye kokufinyelela omunye locezu. Mhlawumbe, ebuntwaneni bethu, futhi kwaba kwemvelo, kodwa manje kunzima ukuthola ukudayiswa lesi sidlo ngaphandle zonke izinhlobo imibala nokunambitheka. Nokho, kukhona njalo indlela yokuphuma. Esimweni sethu, labo-ke siwukufunda indlela ukupheka marmalade ekhaya. Masiqale!
Marmalade nge agar-agar: Kulungele imithetho
Kwenye yezingxenye esemqoka, ngenxa lapho marmalade futhi ezidinga ukungaguquguquki yayo isici, - agar agar e. Uma uphatha ukulithola, sebenzisa iresiphi elandelayo. ingilazi yamanzi thumba bese wengeza nalokho strawberry (150 g), ngaphambilini wageza ehlutshiwe imisila. Ubilise imizuzu 10, bese ususa amajikijolo, uthele amanzi 4 nezinkezo enkulu ushukela. Bilisa amnandi sitrobheli isiraphu imizuzu 5, ususa emlilweni futhi epholile. Ngo isipuni esigcwele amanzi chaza agar-agar bese uyifaka kwi-isiraphu. Ubilise phezu ukushisa eliphezulu imizuzu 2, bese kuphole kancane, uthele formochkam. Marmalade has ukuma esiqandisini isikhathi esingangehora, khona-ke ungakwazi ukuhlola wona ukulungela, futhi ukuphuma ukuma. Ngenxa agar-agar ngeke zigcwale amanzi at Igumbi lokushisa futhi izogcina ukubukeka kwayo ephelele.
Gelatin - akuyona nje jelly, futhi marmalade kodwa
Marmalade ekhaya kungenziwa kuphekwe ngesisekelo gelatin. Ngenxa yalesi sidinga ezisawolintshi juice (2 izinkomishi), amanzi (50 grams), gelatin (4 wezipuni) kanye noshukela (2 izinkomishi). I ekahle kungaba zimnandi uswidi orange marmalade. Ngakho kwathi amnandi futhi omuncu, e-orange juice, engeza 50 amagremu kalamula. Gelatin uthele amanzi ashisayo wasiqashisa zigcwala emaminithi la-15. Epanini, uhlanganise ijusi ezisawolintshi izithelo, ushukela, uthele le gelatin nokushisa kuze ushukela siphela, ibangele njalo. Khona-ke ususa emlilweni uthele pan lelungiselelwe. Kususe ku esiqandisini, okungcono ngobusuku obubodwa. marmalade Ready njengoba oyifunayo, ungakwazi Roll in ushukela noma oluyimpuphu.
Yemvelo marmalade izithelo
Uzowathola umangale, kodwa ungenza marmalade ekhaya ngaphandle kokusebenzisa gelatin noma agar-agar. Zonke okudingayo, - izithelo kanye noshukela. I yimpumelelo inhlanganisela - apula enuka omuncu ne plums ezivuthiwe. Izithelo ehlutshiwe pitted, uthathe izingcezu ezincane bese Bhaka kuhhavini kuze kuphele isigamu sehora at 180 degrees. Khona-ke ugaye kubo ngokuphindaphindiwe ngokusebenzisa ngesihlungo ukuthola puree eyohlobo. Thina ucabange ukuthi ubhekene epanini, ushukela bese upheka kuze ancibilikisa phezu komlilo kancane. Thina ukubola ingxube okuholela abicah isikhunta futhi bavunyelwe ukuba uthele ekamelweni lokushisa izinsuku ezingu-2-3. Thola uswidi elimnandi kanye nesezingeni eliphezulu yabantu le nkosazana. Marmalade ngaphandle agar kanye gelatin nakanjani zemvelo, ingozi izibalo kanye esiswini. Qiniseka Yokuphatha le emangalisayo uswidi nezintombi zabo.
Rhubarb iyisitshulu: iresiphi for isiphuzo esimnandi
Indlela ukuze adle oyster? Imithetho yokuziphatha nokupheka izimfihlo
Social Psychology njengoba Isayensi